အမျိုးသားများအတွက်နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံး 24 ကျား Tattoos ဒီဇိုင်း IDEA - Tattoos အနုပညာအကြံပြုချက်များ
အမျိုးသားများအတွက်နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံး 24 ကျား Tattoos ဒီဇိုင်း Idea
sonitattoo သြဂုတ်လ 8, 2016
ကျား Tattoo အဓိပ္ပာယ်ကို
ကျားတက်တူးထိုးအထူးသဖြင့်အာရှသားတို့တွင်လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ #tiger ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကထူးချွန်စေသည်အရာဖြစ်တယ်။ တစ်ဦးကျား၏တက်တူးထိုးလူကိုမဆိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအသက်ရှင်နေထိုင်သောလမ်းနေတဲ့အကြောင်းအချက်ပြအရာဖြစ်တယ်။ သူတို့ကအာရုံငါးပါး, ကြမ်းကြုတ်ခွန်အားနှင့်အာဏာကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သူတို့ကသူတို့ကောငျးကငျအင်အားကြီးကအုပ်ချုပ်လျက်ရှိသည်ဟုယုံကြည်သောကြောင့်နေရောင်ခြည် Totem ဖြစ်ဟုဆိုသည်နိုင်ပါသည်။
သူတို့ဗီဇအတိုင်းယုံကြည်သောကြောင့်ကျား #tattoo အဘို့အသွားသူတွေကိုစိတ်အားထက်သန်မှုကအုပ်ချုပ်ကြသည်မဟုတ်။ သူတို့နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်အစွမ်းထက်ပြသရန်ချစ်သူများမှင်ဒီတက်တူး။ အဆိုပါကျားကွယ်လွန်သွားကြပါပြီသူမြား၏ကာကွယ်ဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်နေသည်။ ဒါကသူတို့မကြာခဏသင်္ချိုင်းသို့မဟုတ်ဂူပေါ်တွင်တွေ့မြင်နေကြသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျားတက်တူးထိုးကမ္ဘာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်, သူတို့သည်လည်းအရာတွေအများကြီးကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဤအတက်တူး၏မူကွဲသူတို့ကိုထူးခြားသောစေသည်အရာဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ Brute အစွမ်းသတ္တိ, ပါဝါ, Dominic, အိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson နှင့် Nobility, အန္တရာယ်နှင့်အဗဒ္ဒုန်, စွမ်းအင်, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်, စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဤလူမျိုးကိုအများကြီးထိုသို့အသုံးပြုခြင်းကိုလုပ်နေပါတယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျား၏တက်တူးထိုးဖို့ပူးတွဲပါသောအလှတရားကယောက်ျားမိန်းမတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးစေသည်အရာဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်တို့အများစုဟာမကြာခဏ Asia ၏လူတို့နှင့်အတူကျားတက်တူးထိုးဆက်နွယ်။ ကျားအာရှအကြားရေပန်းစားသည်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအာရှကျားဒီရက်တက်တူးအဖြစ်ရှုမြင်ကြောင်းတစ်ဒဏ္ဍာရီသတ္တဝါအဖြစ်လူသိများဖြစ်လာသည်။
sexy ကျား Tattoo
ကျားတောင်ပံသို့မဟုတ် wingless ဖြစ်စေအဖြစ်ပုံဖော်နိုင်ပါတယ်။ မိုဃ်းကောင်းကင်ကိုမိုဃ်းဒါမှမဟုတ်ပင်လယ်ကဲ့သို့ကျားနှင့်ဆက်စပ်နိုင်သောအရာတို့ကိုအများကြီးရှိပါတယ်။ သင်အနောက်၌ရှိကြ၏အခါ, လူအခြို့အန္တရာယ်ရှိတဲ့သတ္တဝါများအဖြစ်ကစဉ်းစားလိမ့်မည်။
သို့သော်ကျားကောင်းသောကံကြမ္မာ, စည်းစိမ်ဥစ္စာ, အာဏာ, ကြင်နာမှု, လွတ်လပ်မှုနှင့်အာဏာသင်္ကေတမှလူသိများကြသည်။
ယနေ့သင်တက်တူးထိုး၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်နှင့်အများပြည်သူအတွက်ထွက်မတ်တပ်ရပ်နိုင်။ လူတွေကဒီအထူးတက်တူးထိုးဘို့အသွားအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ သငျသညျမလိုအပ်ရပါမည်ဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့တက်တူးသင်သည်တတ်နိုင်မတိုင်မီအာရှသို့မဟုတ်တရုတ်မှင်မှလာကြ၏။
ခေတ်သစ်နေ့ရက်ကိုတက်တူးထိုးအနုပညာရှင်တွေအခြားအဆင့်အထိကျားတက်တူးထိုးတာနေကြသည်။ ဒါဟာသင်ချင် #design အမျိုးအစားကိုအရေးမထားဘူး, သူတို့ကသင်ကိုမဆီးတားနိုင်သောမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တက်တူးထိုးပေးဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
ဒါဟာသင်ကျားတက်တူးဒီဇိုင်းမရှိမဖြစ်ဖြစ်လာသည်နားလည်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ သင်သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုကောက်မီကျား၏အွန်လိုင်းကက်တလောက်မှတဆင့်ရှာဖွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ယူသင့်ပါတယ်။ သင်ပြုရှိသည်သောပထမဦးဆုံးအကြိမ် Vogue ၌တည်ရှိ၏သင်သည်အဘယ်သို့ပြောလိမ့်မည်ဟုသူတစ်ဦး tattooist get ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါလူမျိုးစုကျားတက်တူးဒီဇိုင်းအားလုံးအာရှကျော်လေးစားနှင့်အာရုံငါးပါး, စိတ်အားထက်သန်မှု, ရက်စက်, ပါဝါ, အမျက်ထွက်ခြင်းနှင့်ရက်စက်မှုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့စဉ်းစားကြောင်းတဦးတည်းအစွမ်းထက်သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
ကိုရီးယားမှာတော့လူတွေကျားသူတို့မြင်သောမှတဆင့်မျက်စိဖြစ်ကြပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာ, ကျားဟာအထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောဘုရားသခင်, Shiva သို့မဟုတ်ယင်း၏အဝတ်အဖြစ်ကျားအသားအရေ၏အသုံးချနေသို့မဟုတ်ပေါ်မှာစီးနင်းတှေ့မွငျရသောသူကိုပင် Destroyer သရုပ်ဖော်ထားတဲ့တွေ့မြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည်ကြသည် ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
ဒါကလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အာဏာကိုပြသထားတယ်။ သို့သော်ကျားသေခံခြင်း, မကောင်းသောအသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောကြိမ်ရှိပါတယ်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
သင့်ခန္ဓာကိုယ်မဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအပေါ်မှင်ကသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုမဆိုအရောင်နှင့်အတူလိုက်ပါသွားနိုင်ပါတယ်သင်က on.You ကိုအသုံးပြုထားပြီးသောဒီဇိုင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းမေတ္တာရှင်ရပ်တန့်ဘယ်တော့မှနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအမျိုးသမီးများအတွက်သူတို့ရဲ့လိင်အကြောင်းပြောဆိုရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
ကျားကောင်းသောမရှာဘယ်မှာကိုယ်ခန္ဓာ၏ခဲကိုမဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရှိပါသည်။ ကိုယျခန်ဓာပေါ်မှာဤဒီဇိုင်းမှာကြည့်လိုက်ပါ။ ဒါဟာမင်းသမီးသို့မဟုတ်ပင်ယောက်ျားတွေအများကြီးကအသုံးခနြိုငျရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်သောအဖြစ်ချစ်စရာလှပါတယ်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
ကျားတက်တူးဒီဇိုင်းဒါကောင်းသောမရှာဘယ်မှာကိုယ်ခန္ဓာ၏မဆက်ဆံရှိပါသည်။ ဒါဟာလက်မောင်း, ခြေထောက်, သင်သည်ဤပုံစံဒီဇိုင်းများကဲ့သို့ရှေးခယျြကြောင်းပြန်သို့မဟုတ်မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်စုံလင်သည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
ဤကဲ့သို့သောတက်တူးသင်သည်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပေါ်မှာ၏အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်သောကိုကြည့်ရှုရန်ဒါတော်တော်လေးရှိပါတယ်။ ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အသွားနိုင်ပါတယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
အရောင်သင်ကချင်သောလမ်းသည်နှင့်အညီပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ သင်တို့ပတ်လည်သို့မဟုတ်သင့်တက်တူးဒီဇိုင်းဖန်တီးပေးနိုင်မကျမည်အကြောင်းဘာမှခဲရှိပါသည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
သင်ဤဒီဇိုင်းကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား? သငျသညျမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာအဘယ်အရာကိုသင်ပြောပြသနည်း? ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
ဒီတက်တူးနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်များနှင့်သှေးဆောငျဒီဇိုင်းများ rendering မှကြွလာသောအခါဒါဟာတက်တူးထိုးပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်ရန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်။ သင်သည်သင်၏တက်တူးဒီဇိုင်းနှင့်အတူအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ရန်မအဆုံးလည်းမရှိ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
ဘယ်ဟာကိုသင်တို့တွင်အအသုံးပြုမှုကိုအောင်ဖို့ရှေးခယျြသောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်း; ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းချီးမွမ်းပါလိမ့်မယ်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
ပန်းချီတက်တူးလက်တက်တူးနေရောင်တက်တူးရွှေလင်းတတက်တူးမြှားတက်တူးစိန်တက်တူးmehndi ဒီဇိုင်းအစ်မတက်တူးခြေကျင်း Tattoosမျက်စိတက်တူးရင်ဘတ်တက်တူးတက်တူးထိုးစိတ်ကူးများကငျးမွီးကောတက်တူးသံလိုက်အိမ်မြှောင်တက်တူးလိပ်ပြာတက်တူးလူမျိုးစုတက်တူးရေဘဝဲတက်တူးပန်းဦးရစ်သရဖူကိုတက်တူးလက်မောင်းတက်တူးခြင်္သေ့သည်တက်တူးခြေလျင်တက်တူးငှက်တက်တူးလူတို့သညျအဘို့အတက်တူးကောင်းကင်တမန်ကတက်တူးဆင်တက်တူးဂီတတက်တူးဂျီဩမေတြီ Tattoosချစ်စရာတက်တူးပန်းပွင့်တက်တူးလည်ပင်းတက်တူးကြောင်တက်တူးအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတက်တူးနှလုံး Tattoosနောက်ကျောတက်တူးကြာပွင့်ကိုတက်တူးထိုးအသင်္ချေတက်တူးတက်တူးထချစ်ခြင်းမေတ္တာတက်တူးလက်ဝါးကပ်တိုင်တက်တူးKoi ငါးတက်တူးမိန်းကလေးများအဘို့အတက်တူးရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာတက်တူးrip တက်တူးဟင်္တက်တူးလက်တက်တူးစုံတွဲတက်တူးချယ်ရီပွင့်တက်တူးကျောက်ဆူးတက်တူးလတက်တူးFeather Tattoo